FS9 Mission IN FSX!!!
မေးခွန်း FS9 Mission IN FSX!!!
လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပေါင်း 1 လ #730 by jordom
ငါအချို့ကြိမ်ပျော်မွေ့ don`t တယ် FSX ငါများသောအားဖြင့် FS9 whith ပြုသကဲ့သို့။ ထိုအခါအဓိကပြဿနာမစ်ရှင် aviable ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆိုအပေါငျးတို့သ FS9 မစ်ရှင်များအတိုငျးကွီးကကူညီပေမယ့်အားဖြင့်ရန်အတွက်ကစားနိုင်ပါတယ် FSX?
2 နှစ်ပေါင်း3ရက်သတ္တပတ်အကြာ #747 by Gh0stRider203
0.320 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်